Umthengisi waseTshayina we-Biotechnology Bioproducts Preventive, I-Medicinal Bulk Medicine yokuVimbela, isilwanyana sokugqibela sokuVimbela iMichiza, i-Vaccine Biological Proventive
Biotechnology Bioproducts Ukukhusela,Isigulana sokugqibela seMicrothintelo,IsiQinisekiso sokuQiniswa kweMichiza yokuQala,Iigciwane zeZilwanyana zeMpilo,,
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: Biotechnology Bioproducts Ukukhusela,Isigulana sokugqibela seMicrothintelo,IsiQinisekiso sokuQiniswa kweMichiza yokuQala,Iigciwane zeZilwanyana zeMpilo,,
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Bulk Final
Iintlobo zeMveliso ze- Bulk Final , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Biotechnology Bioproducts Ukukhusela , Isigulana sokugqibela seMicrothintelo ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Ubuninzi beVicella Vaccine
[Inkcazo] (1) Iigxina ezine-hypersensitivity ezaziwayo kunoma yimuphi umbandela walo mveliso kuquka neomycin. (2) Abafazi ngexesha lokukhulelwa. (3) Izifundo ezijongene nezifo ezinzima, izifo ezingapheliyo, iziqhamo ezinzima zezifo ezingapheliyo,...
Ngo-2008, i-BCHT iqalise ngempumelelo imveliso yayo yeVicella Vaccine, Phila eChina. Kwiminyaka elandelayo, i-BCHT iqhubeka ngokuzibophezela ekuphuculeni imveliso kwaye iholele ngo-2010 ukususwa kwe-gelatin kwi-adjuvant kwaye yandisa...
Ubuninzi beNtsholongwane ye-Chicken Pox iLyophilized Attenuated
Ngaba i-ACIP isincomo yokunika igciwane lokugonywa kwe-varicella kwiintsana ngaphambi kweminyaka engama-1 ukuba bahamba ngelizwe lonke? I-ACIP icebisa ukunika umthamo we-MMR kwiintsana ezineminyaka engama-6 ukuya kwe-11 ngaphambi kokuba uhambe...
Ubuninzi beNtsholongwane ye-Chicken Pox Live Atttenated
Ndinegulane elineminyaka eli-11 elinempilo enentsapho yayo eya eZimbabwe. Apho bahamba khona banomlinganiselo ophezulu we-varicella. Ngaba ndimele ndinike i-varicella igciwane ngaphambi kokuba ahambe e-Afrika? Ikomidi elicebisa ukugonywa alicebisi...
Ubuninzi beNtsholongwane ye-Chicken Pox Lyophilized
Kutheni Abantu Badinga I-Chickenpox Vaccin? Uninzi lweziganeko zeenkukhu zincinci kwaye ziqhuba ikhosi yazo kwiintsuku ezintlanu ukuya kwii-10. Kodwa kunokuba nzima kakhulu, nokuba usongela ubomi, kwipesenti yabantu. Ngaphambi kokuba i-varicella...
Ubuninzi beNtsholongwane yePix Pox Live
Uphi umgomo we-Chickenpox? Inkukhu yokukhusela inkukhu yinto ekhuselekileyo enokukhusela phantse nabani na ofumana isitofu sokubamba inkukhu. Kwakhona kuthiwa yi-varicella vaccine, ngenxa yokuba inkukhu isifo sisifo se-varicella- zoster virus ....
Iziphumo ezincinci zingabandakanya intlungu kwisayithi ye-injection, i-fever, ne-rash. Imiphumo emibi kakhulu ayinqabile kwaye iyenzeka ikakhulu kulabo abanomzimba omzimba omzimba . Ukusetyenziswa kwayo kubantu abane- HIV / AIDS kufuneka kwenziwe...
Ubuninzi beNtsholongwane ye-Chicken I-Pox Intenuated Lyophilized
Isitofu sokugonya varicella virus, okwabizwa ngokuba irhashalala sokugonya, i ugonyo okhusela irhashalala . Esinye isithintelo sokugonya sivimbela i-95% yezifo ezilinganayo kunye ne-100% yezifo ezinzima. Amanyathelo amabini okugonywa aphezulu...
Anyone who hasn`t had chickenpox or gotten the chickenpox vaccine can get the disease. Chickenpox illness usually lasts about 5 to7 days. The classic symptom of chickenpox is a rash that turns into itchy, fluid-filled blisters that eventually turn...
Amanqanaba amabini okugonywa angama-90% asebenzayo ekukhuseleni inkukhu. Xa ugonywa, uyazikhusela kunye nabanye kwindawo yakho. Oku kubaluleke kakhulu kubantu abangenako ukugonywa, njengalezo ezinesistim sobuthathaka okanye abasetyhini...
Ubuninzi beNtsholongwane yePix Pox
Ndingenza ntoni? Ukuba ucinga ukuba yinto enzima yokuphendula okanye enye imeko engxamisekileyo enokuyilinda, fowuna i-9-1-1 uze ufike esibhedlele esiseduze. Ngaphandle koko, biza umnonophelo wakho wezempilo. Emva koko, iimpendulo kufuneka zichazwe...
Ubuninzi beNtsholongwane yokuKhuselwa kweNkukhu
Kuthekani ukuba kukho ingxaki enkulu? Yintoni endiyifunayo? Khangela nayiphi na into echaphazelekayo, njengempawu zesifo esichukumisayo , umkhuhlane omkhulu okanye ukuziphatha okungavamile. Izibonakaliso zempembelelo ezinzima ezibandakanyekayo...
Ezinye izinto ezinokuthi zenzeke emva kwesi sigulo: Abantu ngamanye amaxesha bayaphalala emva kweenkqubo zonyango, kuquka nokugonywa. Ukuhlala okanye ukulala phantsi kwemizuzu engama-15 kunokukunceda ukukhulelwa kunye nokulimala okubangelwa ukuwa....
Inkukhu ye-Chicken I-Pox I-Bulk i-Lyophilized Attenuated
Iziganeko ezinzulu ezilandelayo emva kokugonywa kwe-inkukhu ayinqabile. Ba nga ndakanya: Ukutshatyalaliswa (ukugubungela okanye ukukhangela) ngokuqhelekileyo kubandakanywa nomkhuhlane Ukunyanga kwemiphunga (umphunga) okanye ubuchopho kunye neentambo...
Inkukhu Inkukhu Inkukhu Inkukhu Inkulu Ihlaselwe
Izingozi zempendulo yokugonya Naliphi na iyeza, kuquka izitofu, kukho ithuba lokuphendula. Ezi zinto zihlala zinyameko kwaye zihamba zodwa, kodwa ukuphendula okunzulu kunokwenzeka. Ukufumana i-chickenpox yokugonya kukukhuselekileyo kunokufumana...
Inkukhu Inkukhu Inkukhu Inkukhu Ininzi Iphilileyo
Unomzali, umzalwana okanye udade onomlando weengxaki zesistim somzimba. Ngaba uthatha i-salicylates (njenge-aspirin). Abantu bafanele bagweme ukusebenzisa i-salicylates kwiiveki ezingama-6 emva kokufumana igonti ye-varicella. Ngoku kutshatyalaliswa...
Inkukhu yokukhusela i-Pox Isikhumba esikhulu
Abanye abantu akufanele bafumane le gonyo Tshela umboneleli wakho wokugonya ukuba umntu ufumane isitofu: Ngaba kukho nayiphi na inkathazo, isongela ubomi. Umntu owake wathatha ubomi obungozi bokugonywa emva kokufumana umthamo wokugonywa kwenkukhu,...
Inkukhu Inkukhu Inkukhu Inkukhu Ininzi Iphilileyo Qhagamshelana Ngoku
Inkukhu yokukhusela i-Pox Isikhumba esikhulu Qhagamshelana Ngoku
Ubuninzi be-vaccine ye-varicella, iimveliso ezigqityiweyo . Kwaye ithunyelwa eBangladesh.
Ngo-2008, i-BCHT iqalise ngempumelelo imveliso yayo yeVicella Vaccine, Phila eChina. Kwiminyaka elandelayo, i-BCHT iqhubeka ngokuzibophezela ekuphuculeni imveliso kwaye ikhokelela ngo-2010 ukususwa kwe-gelatin kwi-adjuvant kwaye yandisa i-shelf-yokuphila-iinyanga ukuya kwiiinyanga ezingama-36 ezona zide kunabo bonke kwihlabathi ngo-2011.
Uluhlu lweMveliso ezinxulumene noko: Biotechnology Bioproducts Ukukhusela , Isigulana sokugqibela seMicrothintelo , IsiQinisekiso sokuQiniswa kweMichiza yokuQala , Iigciwane zeZilwanyana zeMpilo , Biotechnology Bioproducts Preventive